Zoma, Jolay 14, 2006 Talata, Jolay 4, 2017 Douglas Karr
Dell dia nandefa ny clog tamin'ity herinandro ity, Iray2one. Betsaka ny fanoratana momba izany eo amin'ny tontolon'ny bilaogy… ny olona sasany midera azy ireo ary ny sasany manala baraka azy ireo. Tsy azoko antoka raha mbola nisy nanoratra ilay teny, saingy tiako ilay teny hoe 'Clog' ho an'ny Blog orinasa na orinasa. Nampiako azy io ho toy ny teny manjavozavo amin'ny Wikipedia. Blogs an'ny orinasa dia mety ho fitahiana na ozona. Mila paikady sy fampifanarahana an'ireo bilaogera voarohirohy mba hanao ny Clog:
Misy ifandraisany - manompo ny indostria ve ny bilaoginao? mpanjifa? fanantenana? fifaninanana?
Ara-potoana - raha sendra zavatra ratsy na tsara dia ao anatin'ny paikady haingana hamoaka ilay teny ny bilaoginao?
Marina - tsy misy ny antsipiriany momba ny voninahitra, eo alohan'ireo mpamaky anao ve ianao sa hametraka azy io?
Sarobidy - hanampy ny orinasanao any aoriana any ve izany?
Mety tsy dia misy dikany firy ny fanakanana, minia manao izany. Manantena aho fa ho ekena eran'izao tontolo izao io teny io, satria tsy azoko antoka fa paikady tsara ho an'ny orinasa ny fanaovana sakana. Izany dia nilaza fa tsy milaza aho fa ny bilaogy dia ratsy amin'ny paikadin'ny orinasa. Ny mifanohitra amin'izay indrindra, heveriko fa mahafinaritra. Na izany aza, heveriko fa misy tena tsy itovizany ny fitorahana bilaogy sy ny fanakanana. Miaraka amin'ny fanaovana bilaogy dia manana ny feo ilay olona ary afaka maneho ny fahatsapany am-pahatsorana nefa tsy manahy ny amin'ny vokany. Ny fibahanana, etsy ankilany, dia tokony ho feo iraisan'ny orinasa. Voasivana io. Tokony ho izany.
Dell dia efa nahazo ny sasany Flack as sary momba ny solosaina finday mitsoka ao Japana dia tsy voaresaka tao amin'ny Clog-n'izy ireo satria niely nanerana ny tontolon'ny bilaogy ny vaovao.
Fahadisoana lehibe! Fa maninona no diso izany? Maninona ianao no te-hiresaka olana amin'izao tontolo izao izay olona vitsivitsy angamba no mahalala? Satria raha tsy manao izany ianao, dia lehibe tokoa ny loza mety hitranga.
Rehefa mikaroka ny tontolon'ny bilaogy ho an'i Dell izao ianao dia hahita ny Laptop exploding eo akaikin'ny tampon'ny lisitra! Anontanio ny tenanao…… rehefa nandinika ny lohateny momba ny valin'ny fikarohana ianao, nahita lahatsoratra iray avy ao amin'ny One2one izay manitikitika ny sainao? Nahita an'io lisitra io akory ve ianao?
Ny fahanginana dia mpamono ny fahatokisan-tenan'ny mpanjifa. Ary amin'ny alàlan'ny fitorahana bilaogy, ny orinasa dia manome fitaovana an-tserasera hifandraisana mahomby. Rehefa tsy miseho amin'ny ny bilaogy aloha, mpanjifa mahalala fa tsy miraharaha izany. Vokatr'izany dia heverina ho tsy misy dikany, tsy ara-potoana, tsy marina ary tsy misy vidiny ny sakana.
Skype goavambe VOIP dia mety ho eo amin'ny lisitra. Vao tsy ela akory izay, mpandraharaha sasany any Shina no nilaza fa nanamboatra ny fanaovan-tsoratr'i Skype ny lozisialy ary nampiasa ny lozisialin'izy ireo hiantsoana olona iray hafa ary hampahafantatra azy ireo ny adiresy IP-ny. Izy io dia misy fiantraikany lehibe amin'ny Skype, mametraka ny enkripsi-ny momba azy. Tsy nanafika ny fitakiana akory ny Skype fa nanilika azy fotsiny. Tsy tsara ho an'ireo mpampiasa internet reraka io. Fantatro fa tsy te hanao risoriso an'io aho.
Ka inona no paikadinao manentsina? Raha tokony hiresaka momba ny zavatra tianao horesahina amin'ny be sy ny maro (sy ny fifaninanana ataonao manokana) dia inona ianao tsy vonona hifanakalo hevitra? Ireo lohahevitra ireo no hiverina hanaikitra anao!
Tags: tontolom-bolonganamanentsinabilaogy orinasaDell
17 Aogositra 2006 amin'ny 3:03 PM
fantatro fa cheesy fa tiako ny teny manentsina.
azonao atao ve ny manamboatra dougissmart mankany dougissexy?
17 Aogositra 2006 amin'ny 6:21 PM
dougissexy no ao! Mila maneho hevitra matetika fotsiny ianao.